Fitantanam-pitondrana · Mey, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Mey, 2017
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Mey, 2017
Syria: Manangona Fanohanana Eran-tany ny Fitorevahana Virtoaly
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 31 Mey 2017
Raha miditra amin'ny fahavalon'ny volana nisiany ny fikomiana ao Syria, mihatia mamorona ireo mpikatroka mafana fo mba hahazoany antoka fa tsy hitsahatra ny fifantohana eran-tany mankany amin'ilay zava-mitranga. Mangataka ny tsirairay mba hampiakatra lahatsary ho fanehoana ny firaisankina amin'ireo Syriana mpanohitra ny hetsika fisantarana iray avy amin'ilay Tambajotram-baovao malaza, Sham.
Sodàna: Ho Avy Ny Revolisionam-bahoaka?
Afrika Mainty 30 Mey 2017
Taorian'ny fihetsiketseham-bahoaka tao Tonizia sy Ejypta, nisafidy ny datin'ny 30 Janoary 2011 ny vondrona mpikatroka Sodaney mba hanomboka ny fihetsiketsehana milamina ho fanonganana an'i Omar al-Bashir sy ny governemantany.
Egypta: Ho Arefotra Ilay Sambo Nalaina An-keriny
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Mey 2017
Mbola mampahatsiahy antsika indray ny zava-mitranga i Zeinobia herinandro vitsivitsy taorian'ny fanambarana ny fijirihan'ny jiolahin-tsambon'i Somalia ny sambo Egyptianina .
Hàlatàhaka Manàla Baràka Mahavoarohirohy Ny Minisitry Ny Siansa Sy Ny Fanabeazana, Miteraka Savorovoro Ao Kroasia
Eoropa Afovoany & Atsinanana 29 Mey 2017
Andianà manampahaizana, tohanan'ireo sonia maherin'ny 11.000 voahangona tety anaty aterineto, no mbola mitohy mitaky ny fanesorana ireo mpanao hàlatàhaka tsy ho anisan'ireo mitàna birao ambony amin'ny asam-bahoaka ao Kroasia.
Pôrtô Rikô: Kolikoly Mameno Ny Departemantan'ny Polisy
Amerika Latina 29 Mey 2017
Nisambotra olona 133 tao Pôrtô Rikô ny Birao Federaly mpanao Fanadihadiana (FBI), ka polisy ny 89 tamin'ireo, tao anatin'ilay antsoin'ny Departemantan'ny Fitsaràna Amerikana hoe "ny fanadihadiana goavana indrindra tamin'ny resaka kolikolin'ny polisy teo amin'ny tantaran'ny FBI".. Maneho hevitra ny tontolon'ny bilaogy.
Arabia Saodita: Mihidy Ho An'ireo Vehivavy Mpihazakazaka Ireo Làlana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 29 Mey 2017
Vao haingana izay, noraràna ny fidiran'ireo vehivavy mpihazakazaka ny làlana iray any amin'ny Faritanin'i Asir (Arabia Saodita), satria heverin'ny Vaomieran'ny Fampiroboroboana ny Fahamaotinana sy ny Fisorohana ny Havetavetana ho mampidi-doza. Manopy maso ny sasantsasany amin'ireo tsikeran'ny mpitoraka blaogy mikasika ity raharaha ity i Katharine Ganly.
Shina : Azo Itokisana Ireo Mpampanofa Vatana Raha Ampitahaina Amin'ireo Manampahefana, Araka Ny Fanadihadihana Iray
Shina 27 Mey 2017
Ny mpampanofa vatana àry mba mikokotra amin'ny heriny sy ny sainy rehetra hahazo am-pahamarinana ny volany, raha ny hafa kosa mametsy ireo mpiasa manao ny marina.
Emirà Arabo Mitambatra: Lahatsary Mampihoro-koditra Nanafintohina Izao Tontolo Izao
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 26 Mey 2017
Tamin'ny herinandro lasa, nisy lahatsary manjavozavo efa tamin'ny taona 2005 nivoaka lohatenim-baovao, ary nanafintohina izao tontolo izao. Ny lahatsary, izay navoaka voalohany tao amin'ny ABC News ao Etazonia dia nampiseho an'i Sheikh Issa Bin Zayed al-Nahyan - rahalahin'ny Printsy Sheikh Mohammed ao Emirà Arabo Mitambatra -mampijaly Afgàna mpamboly.
Iran: Ny Zavakanto Hiarovana Hetsi-panoherana
Namolavola sary sy sariitatra mba hanaingona ny zavakanto ho an'ny hetsi-panoherana Iraniana mitohy izay nanomboka taorian'ny valin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 12 Jona ireo bilaogera sady olom-pirenena mpanakanto an-tserasera
Kambodza : Azo Atao ny Manao Fihetsiketsehana, Saingy Ao Anatin'ny Zaridainan'ny Fahafahana Irery Ihany
Kambodza 26 Mey 2017
[amin'ny teny anglisy ireo rohy] Vaovao tsara: efa azon'ireo Kambodziana atao amin'izao ny mikarakara fihetsiketsehana manohitra ny fanjakana tsy arahin'ny tahotra ho voakorontan'ny polisy amin'ny fomba feno herisetra. Vaovao ratsy: ao anatin'ilay Zaridainan'ny Fahafahana vaovao ihany no azo anaovana ireo fihetsiketsehana. Ankoatra izay, ilàna fahazoandàlana ny fahafahan'ireo mpanao fihetsiketsehana miditra ao...